Posted on May 24, 2011 by giriyaad
Madal Si Fiican Loo Soo Agaasimay Oo Ay Iskugu Yimadeen Beelaha Samaroon Ee Degan UK Oo ka Dhacday Manchester 21, May, 2011
Waxa maalinimadii sabtida ahayd ay taariikhduna ahayd 21 May 2011, ka dhacay magalada Manchester shir si heersare loo soo agaasimay oo ay isugu yimadeen xubno ka socday beelaha samaroon
ee degan magalooyinka; Manchester, Birmingham, Luton, Coventry, Northampton, Leicester iyo London.
Shirkan waxaa martigaliyay Samaroonka ku dhaqan magaalada Manchester. Shirku waxa uu daba socoday shir hore oo ay horay u qabsadeen beelaha Samaroon ee degan magalada Birmingham iyo nawaaxigeeda shirkaa oo ahaa mid lagaga arinsanayay horumarka beelaha Samaroon iyo isku xidhnaashaheeda.
Shirkan ka dhacay magalada Manchester ayaan wax badan kaga duwaneen kii horayba loogu qabtay Birmingham, ujeedadiisuna ahayd sidii loo gorfeyn lahaa suurta galinta iskaashi ka dhex aloosma beelaha Samaroon ee ku dhaqan degaanada Waqooyi-Galbeed iyo Galbeedka degaanada dhexe (West Midlands iyo Northwest) ee wadankan ingriiska.
Hadaba shirkaa yaa markii ugu horaysay ku bilowday si diiran oo ay daadihinayeen qaar ka mid ah xubnihii marka horaba casuumaada u fidiyay magaalooyinka kasoo qaybgalay shirkaa, isla markaana ay hamuun u qabeen ka soo qaybgalayaasha in ay mar uun is bartaan.
Markiiba nin waliba waxa uu boobay magaciisa oo sedexan si uu midba midka kale u barto. Is barasho kadib, reer Manchester ayaa waxa ay soo bandhigeen xidhiidhka ka dhexeeya samaroonka degan magaalada Manchester iyaga oo tilmaamay inuu xidhiidhkoodu u baahan yahay in korloo sii qaado sida kan reer Westmidlands iyo Northampton oo kale, una soo jeediyay walaalaha reer Westmidlands in ay talooyin ka siiyan sida ay isku urursadeen iyo halkii ay ka bilabeen ururka la magac baxay Samasons.
Intaa kadib, hadalkii waxaa halkaa kasii amba qaaday gudoomiyaha ururka reer Westmidlands iyo gudoomiye kuxigeenkiisa oo labadooduba si fiican u qaadaadhigay halkii ay ka bilabeen isku ururinta beelaha Samaroon ee degan Birmingham iyo nawaxigeeda iyo sida ay muhiim u tahay in ay beelaha samaroon meelwaliba ay joogan isku ururaan oo ay waliba ka shaqeeyan hormarka umadooda. Waxay kaloo ku dareen UK dhexdeeda in ay muhiim tahay in la is barto gabi ahaanba beesha samaroon dhexdeeda lana joogteeyo dadaalka hormarinta is barashada ilaa iyo xad la gaarsiiyo samaroonka ku dhaqan UK kan ugu yar iyo kan ugu wayn ay isbartaan is barasho dhab ah oo ay u aayaan gabi ahaanba samaroonka ku dhaqan meelaha ka baxsan UK, taasi oo looga gol leeyahay ugu dambeynta in lagu abuuro jawi ay beelaha Samaroon danahooga guud uga tashato.
Si kastaba ha ahaatee waxaa ka muuqatay kasoo qaygalayaasha madashaa farxad aad u fara badan iyo in ay maanta taabagashay ayaa ka talintii beelaha samaroon mar hadii heegan loogu jiro sidii looga talin lahaa masiirkii beelaha samaroon meel waliba oo la joogo.
Waxa wada hadalkii ka socday halkaa isna ku xoojiyay talooyinkiisa sarkaal ka socday saraakiishii ka timid magaalada Northampton oo in badan ku celceliyay ‘’waxaan idinku dardaarayaa in aad marwaliba badisaan kulamadiina aad kaga tashanaysan aayaha umada samaroon ee ku dhaqan magaalooyinka UK’’.
Waxa sidoo kale iyaduna xusid mudan oo meesha fadhiyay oo isna hadalkiisa isugu soo biya shubay, ‘’nin walibow ka fikir sanduuqa aad ku dhexjirtid dibadiisa’’ oo isaguna ahaa aqoonyahan ka mid ahaa xubnihii sababay in uu qabsoomo shirkan ka dhacay magaalada Manchester isla markaana ka mid ah aqoonyahanada beelaha samaroon ee degan magaalada Manchester.
Gabagabadii, waxa la is dhaafsadaba araa iyo aragtiyo kala duwanba, kuwaa oo u badnaa intuba wax wada qabsi, dhaqaale abuur iska warhayn iyo isku xidhnaan joogta ah meel waliba oo ay ku dhaqan yihiin beelaha samaroon ee degan magaalooyinka UK. Waxaa lagu soo afjaray in ay gobolkasta iskood isku soo aagaasimo samaystaana gudi lagala soo xidhiidho waxii ay u baahato Beelaha samaroon eek u dhaqan gudaha dhalka UK iyo dibadiisaba. Isla markaana ay marwaliba beelaha samaroon iska warhayn karaan xidhiidhkooduna xoogaanado. Taasi oo suuro galin karta in mustaqbalka la isku wada darsoomi doono marka ay magaalo waliba iskeed isku soo abaabusho.
Markii lagu wada qadeeyay madashii, waxay ku dhamaatay dardaaran la isku dardaaray hormarka bulsha waynta beelaha samaroon iyo in ay waajib ku tahay nin waliba oo samaroon ah ka shaqaynta hormarka umadiisa.